बच्चाहरु को लागि खोपहरु: युवा स्वास्थ्य जानकारी | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
आमाबाबुले अक्सर आफ्ना छोराछोरीलाई हेरचाह चिन्ता. यो जानकारी Vaccinations बारेमा बुझ्न मदत गर्नेछ.
बच्चाहरु को लागि सुइहरु के हुन्?
एक टीका रोग पक्रने कसैलाई रोक्छ एक पदार्थ हो. खोपहरु (पनि भनिन्छ खोप) मान्छे रोगहरु बच्न तिनीहरूले उपचार आवश्यक अघि मदत. तिनीहरूले विकास प्रतिरक्षा रोग गर्न. फलस्वरूप, तिनीहरूले यसलाई भेट्टाउने धेरै असम्भाव्य छन्.
अमेरिका मा बच्चाहरु, छोराछोरीलाई नियमित राख्न स्वस्थ मदत गर्न सुइहरु प्राप्त. डाक्टर र स्वास्थ्य पेशेवरों बच्चाहरु vaccinating जब तिनीहरूले पालन जो विशिष्ट तालिका विकास. यो तिनीहरूलाई स्वस्थ र रोग मुक्त रहन मद्दत गर्छ किनभने छोराछोरीलाई समय आफ्नो सुइहरु प्राप्त महत्त्वपूर्ण छ.
यो वेबसाइट डाक्टर छोराछोरीको लागि खोपहरु जो तपाईं सिफारिश गर्दै भन्छ. यो डाक्टर तिनीहरूले ती सुइहरु प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर विश्वास गर्दा पनि उमेर भन्छ. तिनीहरूलाई धेरै बच्चाको जीवनमा प्रारम्भिक दिनुपर्छ. जानकारी पढ्न वेबसाइटमा र तपाईं कुनै प्रश्न छ भने आफ्नो डाक्टर सोध्न.
बच्चाहरु स्वास्थ्य बच्चाहरु 'स्वास्थ्य-सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न बारेमा आमाबाबु र बच्चाहरु को लागि जानकारी एक वेबसाइट. तलको लिंक पालना र जानकारीको लागि "आमाबाबुको लागि" मा क्लिक गर्नुहोस्. तपाईं आफ्नो बच्चा सामान्य वृद्धि र विकास सिक्न सक्नुहुन्छ, साधारण बाल्यकाल रोगहरु, र धेरै, अझै धेरै.
Ethnomed विभिन्न भाषामा अनुवाद गरिएको छ जो बाल स्वास्थ्य-सम्बन्धित स्रोतहरूको एक नम्बर छ. खासमा, जवान छोराछोरीको आमाबाबुले मार्ग देखाउने पूस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ एक नयाँ देश मा बच्चाहरु हुर्काउन: एक इलस्ट्रेटेड पुस्तिकाबारे. यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा बाबु आमा राम्रो परिचय छ.
किशोरीहरूको उमेर बीच जवान मान्छे हो 13 र 19. किशोर वर्ष बच्चाको वृद्धि र विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवधि हो. त्यहाँ जो उत्पन्न बच्चाहरु यौवन अवस्था प्रविष्ट महत्त्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनहरू हुन्छन्. जब केटाहरु र केटीहरु यौन परिपक्व बन्न यो अवधि छ. यौवन अवस्था समयमा, किशोर गरेको शरीर रसायन भनिन्छ हर्मोन जारी. तिनीहरूले साथै भावनात्मक परिवर्तनहरू सक्छ.
Puberty101 यौवन अवस्था समयमा शरीर जे जानकारी एक वेबसाइट.
Bodimojo किशोरकिशोरीहरूको लागि लेखिएको छ कि एक वेबसाइट. तपाईं फिटनेस र पोषण सम्बन्धित शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्रोतहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, सामाजिक जीवन, र सम्बन्ध र थप.
Kidshealth पनि समर्पित छ जो आफ्नो वेबसाइट को एक खण्ड छ किशोर स्वास्थ्य समस्याहरू.
सेवा किशोर स्वास्थ्य संसाधन को एक संग्रह इन्टरनेट मार्फत छ. विषयहरू विभिन्न जानकारी अन्वेषण गर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, लैंगिक स्वास्थ्य र किशोर गर्भावस्था देखि, स्वास्थ्य र पोषण गर्न, लागूपदार्थ र रक्सीको दुरुपयोग गर्न.